UMongameli kaJohn F. Kennedy
UMongameli we-35 we-United States
UJohn Fitzgerald Kennedy (1917-1963) wakhonza njengomongameli waseMelika angamashumi amathathu nesithandathu. WayengumKatolika wokuqala ukhethwa eofisini, kwaye yena nomkakhe bazisa i-White House. Iziganeko ezininzi eziphambili kwimbali yaseMelika zenzeke ngexesha lakhe elifutshane kwiofisi, kuquka uhambo luka-Alan Shepard kwindawo kunye neCrisis of Missile Crisis. Wabulawa ngoxa wayesebenza ngoNovemba 22, 1963.
Ukuzalwa: ngoMeyi 29, 1917
Ukufa: NgoNovemba 22, 1963
Ixesha le-Ofisi: NgoJanuwari 20, 1961-Novemba 22, 1963
Inani leMigaqo ekhethiweyo: 1 kwikota
UMongameli wokuqala: uJacqueline L. Bouvier
"Abo benza ukuguqulwa koxolo abanakwenzeka ukuba benze ugulo olwenzisayo."
Iziganeko Ezinkulu Nangona Ku-Ofisi
I-Peace Corps yadala (1961): Umbono wokudala "i-Youth Peace Corps" yaba yinxalenye yecala likaKennedy ngo-1960. I-Peace Corps yasungulwa njengenxalenye yeSebe likaRhulumente ngenjongo jikelele yokukhuthaza "uxolo nobungani" ukudibanisa iimfuno eziphathekayo kwiindawo ezikhuselekileyo kwihlabathi kunye nokuphucula ukuqonda phakathi kweenkcubeko.
I-Bay yeeNgulube (1961): Ekulweni kukaRhulumente waseMelika ukuzama ukuphanga uFidel Castro, phantse yonke inxalenye yesicwangciso esiphenduliweyo. Ibutho elifihlakeleyo elijoliswe ukuba libukeke lilahla iindiza zeCuban kunye namajoni ayibonakaliswe ngokungenakuphikiswa ukuba yi-US inkxaso, kwaye isikhundla sikaCastro sasiqiniswa kakhulu, singabi buthathaka, sisiganeko.
I-Wall yaseBerlin eyakhiwe (1961): Abemi base-East Berlin abaya kulala kwisixeko esahlukileyo kodwa bengenamngqungquthela basukuma ngo-Agasti 13, 1961 ukuba bazibandakanye ngaphakathi ngaphakathi kwendawo engqongeyo eya kuhlala imi emalunga nama-30 eminyaka.
I-Crisis of Missile Crisis (1962): I- Kennedy kunye neNkulumbuso yeSoviet, uNicita Krushchev, ukukhusela iimbambano eziqhubekayo zaseCuba yinto yokuvavanya kwe-diplomacy yehlabathi jikelele kunye neyona ndlela yokuqala yamazwe aseMelika ukuba imfazwe yenyukliya yayinokwenzeka.
Uqhagamshelwano noJohn F. Kennedy Resources
Ezi zixhobo ezongezelelweyo kuJohn F Kennedy zingakunika ulwazi olungakumbi malunga nomongameli namaxesha akhe.
Uhlobo lukaJohn F. Kennedy : Ukujonga ngokucacileyo ubomi bukaJohn F Kennedy, ukususela ebuntwaneni ngexesha lakhe njengoMongameli. Le biography inikezela ngolwazi olunzulu ukukunceda ukwazi ukuqonda kakuhle umntu kunye nokulawula kwakhe
Ulungelelwano lwamalungelo oluntu: Funda malunga nabantu, indawo, kunye neziganeko ezifake ukunyakaza kwamaLungelo eSintu aseMelika. IsiBrown v. Isigqibo seBhodi yeMfundo sazisa ukuqala kwentshukumo. Nangona kunjalo, ezininzi iimvavanyo kwakumelwe zikhuthaze ngaphambi kokuba kukho utshintsho lwangempela kwimvelo yaseMelika.
IMfazwe yaseVietnam : iVietnam yimfazwe eyabangela intlungu enkulu kumaMerika amaninzi kwaye yabonwa ngabanye ukuba yimfazwe engeyomfuneko. Fumanisa ukuba kutheni inxalenye ebalulekileyo yeMbali yaseMerika.
UDwight Eisenhower : Umongameli othandwayo obengaphambi kweKennedy ngamagama amabini eofisini. Ubongameli bakhe babone ukuphela kweMfazwe yaseKorea, iBrown v. IBhodi yeMfundo , kunye nokudalwa kwe-Interstate Highway System.
ULyndon Johnson : I-Vice-Mongameli wangena kumongameli emva kokuba uKennedy abulawe. UJohnson ukhethwa kwikota yesibini ngo-1964. Uongameli wakhe ukhunjulwa ngenxa yokuphuhliswa kwamalungelo oluntu kunye nokunyuka kweMfazwe yaseVietnam.
Izintelezi Zenhlanhla kunye neMpawu